वामदेवले राष्ट्रियसभामा जान किन अस्वीकार गरे ?:: Mero Desh
वामदेवले राष्ट्रियसभामा जान किन अस्वीकार गरे ?
Published on: १८ पुष २०७६, शुक्रबार १५:०६
काठमाडौं : लामो चर्चा र बहसपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले शुक्रबार राष्ट्रियसभाका १६ उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ। सातै प्रदेशबाट १६ उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउँदा राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित नाम नारायणकाजी श्रेष्ठ र बेदुराम भुसालमात्र
परेका छन्। श्रेष्ठ नेकपा प्रवक्तासमेत हुन्। श्रेष्ठ गत आम निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर-२ मा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएका हुन्। बिहीबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गर्दा पनि वामदेव गौतमले भने राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गरेका हुन्। बिहीबारको बैठकमा गौतमले राष्ट्रियसभामा जान अस्वीकार गरेपछि शुक्रबारको सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम टुंगो लगाएको हो।गौतमले आफूलाई राष्ट्रियसभामा लाने भए संविधान संशोधन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई चुनौती दिए। उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेपछि मात्र त्यहाँ जाने अडान दोहोर्याएपछि अध्यक्षद्वयले गौतमबिनाका अन्य नेताको नाममा सहमति गरेका हुन्।
‘राष्ट्रियसभामा म त्यसबेला जान्छु। जब नेपालको संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन्’, गौतमले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। नत्र म त्यस्तो संस्थामा सदस्य हुन्न। म जहाँ रहेपछि कार्यकारीसहितको शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु।’
गौतमको अडान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यबीच समानता हुनुपर्ने हो। ‘यो असमानता हटाउनुपर्छ। म शक्तिशाली संस्थामा रहन चाहन्छु। मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको छ’, गौतमले थप भने, ‘म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो। २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो।’
गौतमले सांसद र मन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानु भन्दा बाहिर बसेरै पार्टी संगठनको काम गर्ने बताएका छन्। आफ्नै अडानका कारण राष्ट्रियसभामा नगएका गौतमले पार्टीमा भने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदैछन्। आगामी पुस २३ गते बस्ने नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले गौतमलाई विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाउँदै छ। यसअघि नै सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पारित गरेपछि गौतम उपाध्यक्ष हुनेछन्। नेकपा सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये प्रवक्ता श्रेष्ठसमेत राष्ट्रियसभामा जाने निश्चित भएसँगै संघीय संसदमा सहभागी नहुने वामदेव एक्लो सदस्य बन्ने छन्।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादल राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने अन्य सबै सचिवालय सदस्य प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। नेकपा सचिवालयले शुक्रबार चयन गरेका १६ उम्मेदवारमध्ये ९ पूर्वएमालेका छन् भने ७ पूर्वमाओवादी हुन्। भर्खरै मात्र मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा विद्यावारिधी पूरा गरेका नेता भुसाललाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको हो। भुसाल नेकपाभित्र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छन्।